UKUHAMBISA UMATSHINI: UKUSUKA KUKUMKANI UKUYA KUVAVANYO LWE-ALBHAMU LUKATHIXO - IINDABA
Ukusuka kuKumkani kuye kuthixo
Kwi-albhamu yakhe yamva nje, umrepha waseBuffalo kunye nelungu lesithathu esithetha nzima uGriselda wenza ibhidi yakhe yokuqala kubaphulaphuli abakhulu.
Iirekhodi zikaBuffalo iGriselda Record zakhe ubuchwephesha kwintshona yeNew York ngokuvelisa imveliso ngobugcisa obukhethekileyo, obubonakaliswe bubumdaka obuhleli ngaphakathi obunxibe ubuhle obuthulisiweyo. Sisandi sobusuku obude kunye nobusika obubandayo, ubugcisa obenziwe zii-hustlers zisebenza nzima ekusithekeni, zingenakho ukufumana inkxaso nkqu nakumaziko asekuhlaleni. Njengenye ye-MCs yokusekwa kwayo, iConway Machine ifike yazisa uBuffalo njengesixeko esilityelweyo, ephethe i-chip egxalabeni lakhe elikhulu ngokwaneleyo ukukhusela ilanga. Kodwa kwiLP yakhe yamva nje Ukusuka kuKumkani uye kuThixo , UConway ujonge ukulahla imida yakhe yasemhlabeni ngenxa yento esezulwini.
Ilizwi lomqokeleli sisixhobo sabo, kwaye bambalwa abanesinye esahlukileyo njengeConway. I-Bell's Palsy yakhe (isiphumo samanxeba aliqela okudutyulwa) yahlulahlula isibizo sakhe kanye ezantsi embindini wobuso bakhe, kwenye indawo phakathi kobukhali kunye nokutyibilika. Ungumbhali weengoma onomdla wokuthanda ukubalisa, kwaye amazwi akhe ahlala eqondakala, nokuba ngamanye amaxesha avakala exinekile kumazinyo atshixwayo. Ukuhamba kwakhe kunokujika umkhondo ophakathi ube yinto engalibalekiyo, kwaye asebenze njengefoyile efanelekileyo kumzalwana wakhe uWestside Gunn.
sebenzisa iigugu 3 ifolokhwe
Amagama esixhobo esikhethekileyo esihambisa kuwo Ukusuka kuKumkani uye kuThixo zihlala zicacile-nangona zithe zahlulwa-iintsomi zasesitalatweni zibaliswa ngamagama akrelekrele kunye nobuchule bokwenza imiboniso. Uziphatha ngokuzithemba komntu owaziyo ukuba kunzima, kwaye ke akoyiki ukuba sesichengeni, esongela ubundlobongela kunye nokuphalaza iinyembezi ngomphefumlo ofanayo kwiJuvenile Hell (Ndalila xa kwasweleka uLizwe uMike, intliziyo yam yaphuka / yaqhubeka iyadi, fumana umhlathi wakho waphuke, ukuya kuthi ga kwimivalo iya / Ayikunyusanga ibar kuphela, ibha yaphuka).
Inenekazi lombane ujanelle monae
Ukusuka kuKumkani uye kuThixo Iikhredithi zemveliso zineenkwenkwezi, ezibandakanya amashumi eminyaka yobukhosi be-hip-hop, kubandakanya iNtshumayelo ye-EPMD, u-Erick Intshumayelo, iNkulumbuso ye-Gang Starr, iNkulumbuso ye-Mobb Deep, kunye ne-maestro elawulayo umgulukudu , Ingcali yemichiza. Uninzi lwemveliso luphethwe ngumvelisi wase-UK uBeat Butcha kunye no-Griselda ongumvelisi wasendlini uDaringer, ohlonela ngokwaneleyo kwii-OG esele zikhankanyiwe ngaphambili Ukusuka kuKumkani uye kuThixo ayinamthungo noko. Okukodwa ngaphandle kuvela kwimveliso emibini yeli xesha lemveliso, uHit-Boy noMurda Beatz.
UAnza kaMurda Beatz udada a Igongqongqo eliphindwe kabini -eque chiptune melody at a buoyant beat, kwaye kuvakala ngathi ayikho enye into kwi-albhamu. Kodwa uHit-Boy wanceda uloyiko LUKATHIXO lelona cwecwe lichukumisayo kwelicwecwe, ngesingqi esimenyezelayo esibamba ngokungakhathali ibassline ekunikezeleni ngethontsi elibalwayo. Ukufakwa kwivesi eyi-Dej Loaf esebenziseka kakuhle inomdla, ukutsho nje okuncinci-ukuhanjiswa kwakhe kwe-AutoTune eneelekese kunamathela ngaphandle njengesithukuthezi esibuhlungu ngokuchasene nokuhamba kwe-mahogany ethulweyo ehlala iirekhodi zeGriselda. Kwaye i-vibe iyanyamalala ngokukhawuleza njengoko ifikayo, ibuyela umva kwimitya yokuhlukumeza ye-Method Man collab Lemon. Yindinyana eyomeleleyo evela kuMnu Meth kwiminyaka (Si-creamin 'em ngeepokotho zemali engcolileyo, ndicocekile kwakhona / Akufanele ndikuxelele ukuba ndiyidope, maneka inaliti kuyo), kodwa ukulandelelana kuyayenza akukho luncedo.
Ukusuka kuKumkani uye kuThixo Ingathathelwa ingqalelo njengomzamo oqinileyo osuka kwii-MCs ezininzi, kodwa kuyacaca ukuba iConway ineenjongo zayo ezibekwe ngaphezulu. Emva kokuba oyisile idolophu yakhe, uConway ngoku ufuna udumo kwihlabathi liphela. Kwaye ubukhulu becala, lihlabathi elihambile ukusuka kwisandi saseNew York sika'90. Kukho iindlela zokufumana umkhombandlela omtsha, kodwa okuninzi Ukusuka kuKumkani uye kuThixo ufumana iConway inyathela amanzi. Kwaye okufakwe emva kwexesha kuluhlu lwengoma- kubandakanya ezi zinto zintathu zidibanisa i-homie yakhe u-DJ Shay (osandula ukusweleka eGriselda kwimveliso ephambili) kunye neendlela eziveliswe yi-Nkulumbuso ye-DJ kunye neKhrysis- kubonakala ngathi bajonge umva kakhulu kunaphambili.
UConway uyavuma ukuba le LP yenzelwe ukuba ibe sisibheno kwirekhodi lakhe elizayo le-Shady, UThixo akazenzi iimpazamo , irekhodi eliya kuphawula utshintsho olwandle kuye nakuGriselda xa iyonke. Kwaye ukuba ufuna ukuphalaza uhlobo lwe-rapper tag kwaye aphumelele kwinqanaba elilandelayo lokuma, uya kufuna irekhodi eliphakamisa isandi seGriselda ngaphaya kwemida yezitalato ezinomkhenkce zeBuffalo.
igazi elininzi, iingoma ezininzi
ipati kamakhelwane ndilungile
Amawele aphakamisa umculo obuyayo
ocarnia womculo wexesha
evekini unxunguphalo sithandwa sam
Uhlobo lwe-mat kunye ne-kim